भलिबलमा छाप, शोलेको उपनाम - Kheladi News Kheladi News
भलिबलमा छाप, शोलेको उपनाम
राजन पौडेल- पोखराको बजारमा भर्खरै हिन्दी फिल्म शोलेको चर्चा थियो । शोलेको टिसर्ट पनि आएको थियो । शोलेकै टिसर्टमा थिएँ । गाँउबाट भर्खरै पोखराको अमरसिंह माविको खेल मैदानमा भलिबल प्रतिस्पर्धाको लागि उत्रिएका थियौं । खेलमा सबैको ध्यान खिचिने गरी प्रदर्शन गरियो । उत्कृष्ठ प्रदर्शन गरेपछि दर्शकले बलराम क्षत्रीलाई शोलेको उपनाम दिए । विरेन्द्रशिल्ड प्रतियोगिता पोखरा रंगशालामा थियो । गाँउबाट भलिबलको टिम पोखरा आउनुपर्ने थियो । टिमको छनोट पनि गरियो । तर शोलेले खेल्दैन भने हामी पनि खेल्दैनौ भन्ने थियो । अखिर शोले भनेको को हो भन्ने यकिन विद्यालयमा थिएन् । देउरालीस्थित विश्वशान्ति माविमा आफ्नै दाजु प्रधानाध्यापक थिए । दाजुलाई भाईले भलिबल खेल्छ भन्ने यकिनै थिएन् । तर साथीभाइले बलराम क्षत्री(शोले) सहभागि नहुने भएपछि नजाने निर्णयमा पुगे । त्यसपछि दाजुले पनि भाइको खेलप्रतिको अभिरुची र विद्यालयको इज्जतको लागि पनि टिममा उनलाई सहभागि गराउनुपर्ने भयो । ‘भलिबल परिवार त्यसमा पनि दाजुको स्वीकृति विना खेल्थिन् ।’ उनी सम्झन्छन् । विद्यालयको टिमबाट विरेन्द्रशिल्डमा सहभागिता जनाएपछि भलिबल खेलप्रतिको औपचारिकता शुरु हुन थाल्यो । कास्की जिल्लाबाट खेल जीबन सुरुवात गरि अन्तराष्ट्रियस्तरसम्म पुग्न सफल खेलाडीहरु मध्यका एक खेलाडी हुन बलराम क्षत्री ‘शोले’ । कास्की जिल्लाको भरतपोखरीमा बि.स. २०१७ साल भाद्र १५ मा बुबा कृष्णबहादुर क्षत्री तथा आमा धनमाया क्षत्रीको सन्तानका रुपमा जन्मिएका भएका का हालका भलिबल प्रशिक्षक बलराम क्षत्री सानैदेखि नै भलिबलमा चाख थियो । तत्कालिन अबस्थामा बिरेन्द््रशिल्डको माध्यम बाट आफ्नो औपचारिक खेल जीबन शुरु गरेका हुन् । पहिलो पटकको बिरेन्द्रशिल्ड प्रतियोगितामा भाग लिन आउदाको अनौठो अनुभब छ—‘खेल्नका लागि बिद्यालयको टीममा परिसकेपछि प्रधानाध्यापक रहेका आफ्नै दाजुसंग अन्य बिद्यार्र्थीले जानकारी गराएपछि मात्र दाजुलाइ भाइले भलिबल खेल्ने गरेको थाहा पाए । दाजुले साथीहरुसंग उस्ले भलिबल राम्रो खेल्छ र भनि प्रश्न तेर्साएपछि साथीहरुले उ हाम्रो प्रमुख खेलाडी हो उ बिना टीम राम्रो हुदैन भनेपछि छक्क पर्नु भएछ । अतिनै अनुशासित भएकाले दाइलाई नसोधि कतै खेल्न जादैन्थिए ।’
उनको खेल जीवन सानैबाट सुरु भएतापनि २०३० सालमा बिश्व शािन्त मा.बि. सातमहाने देउरालीको टीमबाट खेलि सकेपछि अझ बढि निखारिए । उनले त्यसपछि बिभिन्न चरणहरु पर गर्दै कास्की जिल्लाको प्रतिनिधित्व गरे । कास्की जिल्लामा पनि उत्कृष्टमा पर्दै गण्डकी अञ्चलको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा खेल्ने अबसर प्राप्त गरे । उनी सम्मीलित गण्डकी अञ्चलको टीमले प्रथम राष्ट्रिय खेलकुदमा दोस्रो स्थान, दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुदमा प्रथम स्थान र तेस्रो राष्ट्रिय खेलकुदमा तृतिय स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको थियो । त्यसको केही समय पछि नेपालको राष्ट्रिय टीमको प्रतिनिधित्व गर्ने अबसर पनि प्राप्त गरे । उनले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै नयां दिल्लीमा भएको एशियन गेम र जापानमा भएको एशियन च्याम्पियनशिपमा सहभागिता जनाई सकेका छन् । नेपालमा भएका मैत्रीपूर्ण खेलहरुमा पनि टीमको महत्वपूर्ण सद्स्यको रुपमा सहभागी थिए । पहिलो प्रशिक्षकका रुपमा बिद्यालय जीवनमा आशबहादुर नेपालीलाई मान्नु हुन्छ भने जिल्ला स्तरमा आईसकेपछि स्व. रंजित गुरुङ, प्रचण्डमान सिंह जापानिज प्रशिक्षक सोजिलाई आफ्ना गुरुको रुपमा क्षत्री मान्छन् । उनलाई पोखरेली पुराना दर्शकहरुले शोले उपनामले चिन्ने गर्दछन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद पश्चिमाञ्चल खेलकुद बिकास समितिमा क्षेत्रीय तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्रमा उपनिर्देशकको रुपमा कार्यरत छन् । भारतको पटियालाबाट भलिबल खेलमा डिप्लोमा कोर्ष उत्तीर्ण गरी भलिबलको प्रशिक्षण तर्फ अग्रसर भएका हुन् ।